RASMI: Manchester United oo xaqiijisay bixitaanka mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
(Manchester) 27 Jan 2021. Naadiga Manchester United ayaa si rasmi ah u shaacisay inuu idlaaday heshiiskii uu kooxda kula joogay laacibka weerarka ka ciyaara ee Odion Ighalo.
Ighalo ayaa heshiis amaah ah ku joogay Old Trafford tan iyo Jannaayo 2020, inkastoo heshiiska xilligan soo gaaray uu markii hore ku ekaa bishii May ee sanadkii hore.
Man United ayaa sare usii qaadday heshiiskiisii amaahda ahaa, iyadoo la soo gaarsiiyay bishan Jannaayo ee bilawga 2021, waxaana Red Devils ay xaqiijisay inuu idlaaday heshiiskii amaahda ee laacibka ka soo jeeda dalka Nigeria.
Si kastaba ha ahaatee, Ighalo ayaa ku laabanaya naadigiisa Shanghai Greenland Shenhua kaddib 12 bilood oo uu ku sugnaa Masraxa Riyada,
31-jirkan ayaa si qurux badan ku bilawday waayihiisa Manchester isagoo labo gool ka dhaliyay kooxda Derby County kulan ka tirsanaa Emirates FA Cup, sidoo kale waxa uu goolal ka dhaliyay tartanka Europa League fasal ciyaareedkii hore kulammadii uu ka hor tagay Club Brugge iyo LASK.
RASMI: Arsenal oo dhammeystirtay saxiixa Martin Odegaard... (Muxuu yahay heshiiska ay kusoo qaadatay?)